Fifidianana : Kandidà 8 tsy manana “Trésorier” -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana : Kandidà 8 tsy manana “Trésorier”
Kandida 8 amin’ ireo 36 sisa andrasana, dia ho feno ny isan’ireo mpitam-bolan’ny antoko. Nanamafy ny kaomisiona mpanara-maso ny volan’ny antoko, fa didian’ny lalàna izy ireo hametraka izay olona izay. Mba hanamora ny asan’ny mpitam-bola kosa, dia efa nisy ny antsoina hoe « guide pratique » na toro-hevitra fampiharana hampiasain’ireo mpitam-bola.
Nampatsiahy ireo candida, izay mbola tsy nahavita nanome ny anaran’ireo mpitam-bolany, ny kaomisiona misahana ny fanaraha- maso ny volan’ny kandidà. Nambaran’ ny kaomisiona fa tokony ho tonga mialohan’ny fiatombohan’ny fampielezan-kevitra ny anaran’ireo mpitam-bola, miaraka amin’ ny taratasy fanekeny. Raha ny fanazavana azo avy amin’ny kaomisiona misahana ny fanaraha –mason’ny volan’ny kandidà io mantsy, dia miisa valo ireo kandidà tsy nahavita izany. Nambaran’ny filohan’ ny kaomisiona Rado Milijaonina fa tsy maintsy tanterahin’ny kandidà rehetra, ny fametrahana io mpitam-bolan’ny antoko io. Nambaran’ny kaomisiona ihany koa, fa taorian’ny nitsanganan’izy ireo, dia efa nisy fijerena ny fanatsarana ny fomba fiasa. Ka tamin’izany no namolavolana ny antsoina hoe « guide pratique » na toro-hevitra fampiharana hampiasain’ireo mpitam-bola, ary nisy koa ny fifanakalozana tamin’ ireo banky. Tsara ny mampatsiahy fa takian’ ny lalàna ny tokony hananan’ireo kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena kaonty tokana. Ahafahana manara-maso ny fandehan’ny vola ampiasain’ izy ireo, manana fahefana hanara-maso kosa ny kaomisiona ny fanaraha- maso ny vola ampiasain’ny kandidà.
Azo lazaina anefa fa mandringa ihany ny lalàna, satria ny antoko no teren’ny lalàna hanokatra kaonty fa tsy ny kandidà. Ny fanokafana ny kaonty rahateo anefa, ny mba ahafahana manara-maso ny fandehan’ny vola ampiasaina amin’ny fampielezan-kevitra. Ireo banky izay hametrahan’izy ireo vola kosa, manana andraikitra hanaitra ireo mpanara-maso raha misy ny fidiran’ny vola tsy mazava. Izany hoe afaka ataon’ny kandidà amin’ ny anarany ny kaonty ampidiran’izy ireo ny vola, ka amin’ izay fotoana izay, dia tsy voara-maso izy ireo. Na izany aza dia tsy maintsy hatolotr’ireo kandidà ny mpanara-maso ny vola, ny kipitsopitsony nampiasana izany. Izany hoe hanana porofo avokoa ny vola mivoaka sy miditra, ary tsy misy latsaka.
Hatreto izany aloha dia mbola anatin’ny fanentanana ireo kandidà ihany, ireo mpanara-maso ny vola ampiasain’ny antoko amin’ny fampielezan-kevitra. Mbola tsy nisy resaka kosa ny mety ho sazy na ihany koa fepetra raisina, manoloana ireo izay mbola tsy nanome ny anaran’ny mpitam-bolany. Ankilany ny Ceni izay efa nilaza, fa raha toa tsy tonga alohan’ny fotoana hiatombohan’ny fampielezan-kevitra ny anaran’ny mpitam-bolan’ireo kandidà valo ireo. Ho tonga amin’ ny fampahafantarana ireo antoko ireo ny Ceni raha ilaina.
Natakalon’i Lalatiana Rakotondrazafy ny tombontsoany manokana ilay « etika sy deontôlôjia » noventiventesiny fa tandrovany fatratra, isaka izay miresaka tao amin’ny onjam-peo izy. Amin’izao fotoana izao dia tsy manana izany « etika sy deontolojia » izany intsony izy, raha ...Tohiny